Articles tagged 'mukuhlani'
We will rise again – Mukuhlani 28 March 2018 HARARE - Zimbabwe Cricket (ZC) chairperson Tavengwa Mukuhlani has called on the nation's support in the aftermath of the World Cup Qualifier debacle. Hosts Zimbabwe blew away a double chance of making it to England 2019 after giving away a health 290 total against West Indies after which they ...
D-day for Zim Cricket 13 October 2017 HARARE - Zimbabwe Cricket (ZC) will know whether their bid to host the 2019 Cricket World Cup qualifiers has been accepted when the ICC makes the announcement today. There are two other bids from the United Arab Emirates while Ireland and Scotland submitted as co-hosts. The ICC is currently...
ZC boss endorses Stragglers 1 September 2017 HARARE - Zimbabwe Cricket (ZC) chairperson Tavengwa Mukuhlani on Wednesday paid a courtesy call at the Stanbic Stragglers tournament that ends today at St George's College and Hartman House schools in Harare. The ZC supremo showered praises on the hosting schools, organisers and Stanbic Bank d...
ZC confident of continued Test cricket 22 March 2017 HARARE - Zimbabwe Cricket (ZC) chairperson Tavengwa Mukuhlani is confident that the proposed ICC changes that might see the locals playing second-tier cricket will hit a brick wall. Last month, ICC passed in principle a new constitution that sought to redress the imbalance of power and finance...
Taibu in drive to turn around Zim cricket 21 March 2017 HARARE - Zimbabwe Cricket (ZC) hopes the establishment of the Rising Stars Academy will help turn around the fortunes of the national team in the future. The academy, a brainchild of convener of selectors Tatenda Taibu, was launched in Harare at the weekend with the emerging group of cricketer...
Zim Cricket appoints Streak 17 October 2016 BULAWAYO - Zimbabwe Cricket (ZC) yesterday unveiled former Test captain Heath Streak to take charge of the national team to replace Dav Whatmore, who was sacked in June. Streak returns to the team's coaching set-up after emerging as the top candidate ahead of another Zimbabwe international And...
Masakadza, Ziehl retain posts 14 May 2016 HARARE - Zimbabwe Cricket (ZC) captain Hamilton Masakadza and convenor of selectors Kenyon Ziehl will continue in their respective roles amid uncertainties over their future. Masakadza was appointed captain across all the three formats in June last year after the resignation of Elton Chigumbu...
'ZC needs urgent reforms' 25 August 2015 HARARE - Former Zimbabwe Cricket (ZC) board member Freddy Kapuya says urgent reforms are needed to insure that future elections are transparent and fair. Kapuya was an observer during last Friday's Annual General Meeting (AGM) which saw former Mashonaland Cricket Association chairman Tavengwa ...
Mukuhlani new ZC chairman 21 August 2015 HARARE - It's back to the trenches for Zimbabwe Cricket (ZC) after former Mashonaland Cricket Association(MCA) chairman Tavengwa Mukuhlani was elected as the new board chairman during yesterday's Annual General Meeting. Mukuhlani was a key figure during local cricket's demise when he held vari...